Axmed Madoobe oo la saftay Dowlada Imaaraatka Xili isbahaysi Mucaarad ku ah lagaga dhawaaqay Muqdisho – Daily Som
Axmed Madoobe oo la saftay Dowlada Imaaraatka Xili isbahaysi Mucaarad ku ah lagaga dhawaaqay Muqdisho
By Staff on May 8, 2018 No Comment
Hogaamiyaha Maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in uu la safan yahay Dowlada Imaaraatka Carabta oo uu sheegay xiligaan ay kaga wanaagsan tahay Dowlada Soomaaliya,
Axmed Madoobe oo shalay ku soo laabtay Kismaanyo ayaa ugu horayn ka hadlay xiisada siyaasadeed ee udhaxaysa Dowladaha Imaaraatka iyo Soomaaliya, Booqashadii C/kariin (Qalbi-dhagax), iyo Fatahaadaha wabiyada Juba iyo shabelle.
Arrinta khaliijka Dowladdu dariiq sax ah ma ahan waxa ay ku dhaqmeyso, ama dib ha uga noqoto go’aankeeda, annaga haddii aynu nahay Jubbaland, dowlada Soomaaliya waxtarkeeda maanta Imaaraadkaa nooga wacan.” ayuu yiri
sidoo kale waxa uu si dadban uga Jawaab celiyay Xisbi dhawaan looga dhawaaqay Muqdisho oo mucaarad ku ah Hogaamiyha Puntland waxa uuna yiri “Maanta waxaad aad uga xumahay in culeyska ugu badani ku dhacayo dowlad Goboleedyada, dakhliguna aad u yar yahay na soo gala, dalkana ay dowlad dhexe ka jirto oo wixii soo gala aysan iyaga soo dhaafin”.
Sidoo kale Madoobe ayaa tilmaamay in Dowladda Itoobiya uu kala soo hadlay sidii xoriyadiisa uu dib ugu heli lahaa Sarkaalka ONLF, C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax), wuxuuna tilmaamay xaalada Qalbi-dhagax in ay tahay mid wanaagsan oo aanay jirin wax dhib ah oo heysta.
Ugu dambayn waxa u sheegay in uu Madaxwayne Farmaajo asiga kula taliyay in uu dhex dhexaad ka noqdo xiisada Khaliijka balsa hada ay umuuqatoi id la safan Dowlada Qatar “Hadday noqoto in miisaanka la saaro Qatar, Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxa kaliya ee na taageera waa Imaaraadka iyo Sacuudiga. ciidamada waxaa naga taageera Imaaraadka, Arrinta Khaliijka waxa ay dowladdu ku dhaqmeyso sax maaha”
Axmed Madoobe oo la saftay Dowlada Imaaraatka Xili isbahaysi Mucaarad ku ah lagaga dhawaaqay Muqdisho added by Staff on May 8, 2018